Home » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » LUX Chongzuo, Guangxi efa hisokatra
pisinina 7 ret 792x562
Voahodidin'ny zaridaina tropikaly mamiratra miaraka amin'ny fahitana mahavariana ireo fananganana karst majestic no mipetraka ny LUX * Chongzuo, Guangxi Resort & Villas, toeram-pialan-tsasatra iraisampirenena voalohany ao Daxin County.
Any amin'ny faritanin'i Guangxi dia tafasaraka amin'i Vietnam amin'ny alàlan'ny renirano Mingshi mahafinaritra, tsy lavitra adiny roa ny fitsangantsanganana miala ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Nanning Wuxu izay mifamatotra tsara sy ny Nongguan Nature Reserve, toerana misy ireo langor-doha tandindonin-doza, ary 30 minitra Riandrano transnational lehibe indrindra any Azia, ny Riandranon'i Detian malaza.
'Faly be izahay fa hametraka fananana lafo vidy voalohany indrindra any LUX * Resorts & Hotels' ao Shina, miaraka amin'ny orinasa manana, Guangxi Daxin Mingshi Yijing Tourism Development Co. Ltd, ”hoy i Paul Jones, tale jeneralin'ny The Lux Collective. “Ilay toerana tsy manam-paharoa, miaraka amin'ireo fotodrafitrasa eran'izao tontolo izao, dia hanome toeram-pialofana manokana ho an'ny vahiny hiaina ny tena rendrarendra - fotoana hankafizana ny kanto amin'ny fitsangantsanganana miadana ary hifandraisana misy dikany amin'ny vondrom-piarahamonina, kolontsaina, sakafo ary mozika eo an-toerana.”
Voafehin'ny Teamer International miorina ao Guangzhou, ny maritrano sy ny atitany ao amin'ilay toeram-pialamboly dia natao hifaneraserana amin'ireo tontolo mahafinaritra, mampifangaro voajanahary sy namboarin'olombelona miaraka amin'ny tontolo tsy mbola simba. Ireo mponina ao an-tanàna dia hahita ny sombin'izy ireo avy any an-danitra lavitra ny tabataba sy ny fahalotoan'ny hazavana miaraka amin'ny hazavana napetraka mba hahafahan'ny vahiny miaina zavatra tsy ampoizina amin'ny lanitra feno lanitra feno kintana rehefa milentika ny masoandro.
Ny efitrano fialan-tsasatra dia ahitana suite 50 sy villa enina amin'ny dingana voalohany, misy habe eo anelanelan'ny 80 sy 180 metatra toradroa. Ny efitrano rehetra dia mankafy lavarangana mitodika amin'ny ony, mitazana ireo tendrombohitra karst mahatalanjona sy ala tropikaly. Amin'ny fampiasana akora indizena toy ny hazo sy vato, nohamafisina tamin'ny famaranana varahina, ny endrika minimalistic dia sady mahafinaritra no miasa.
Misakafo sy fisotroana
Notarihan'ny Chef Executive George Qu, izay nahazo mari-boninahitra Chef tsara indrindra tamin'ny Cordon Bleu International Culinary Competition malaza tamin'ny 2018, ny trano fisakafoanana roa sy fisotroana telo dia misy:
• Ny fisakafoanana mandritra ny tontolo andro - Eo amoron'ny ony no misy ny trano fisakafoanana mandritra ny andro manolotra sakafo maraina, sakafo atoandro ary sakafo hariva miaraka amin'ny karazan-tsakafo sinoa, atsimo atsinanana ary tandrefana isan-karazany azo isafidianana, na a carte na avy amin'ireo toeram-pivarotana sakafo mifandraika.
• Steakhouse manokana - Toeram-pisakafoanana mihaja sy kanto mampiseho lovia faran'izay tsara miaraka amin'ny hena nofonosina fatratra sy voafantina divay tsara erak'izao tontolo izao.
• Bar ao an-tampon-trano - Ny farihy an-tampon-trano eo an-tampon-trano dia toerana mety hipetraka amin'ny hariva miaraka amin'ny labiera fanaovana asa-tanana, cocktails ary divay miaraka amin'ireo lovia kely.
• Pool Bar - Manolotra zava-pisotro mamy sy tsakitsaky mamelombelona eo akaikin'ny dobo tsy manam-petra 35 metatra mahatalanjona.
• Maison LUX * - Nahazo aingam-panahy avy amin'ny kafe sy fisotroana kafe eran-tany any Frantsa sy Italia, Maison LUX * dia manolotra kafe, mofomamy vita an-trano ary aisy gilasy artisanaly hamelombelona aorian'ny fizahana iray andro, alohan'ny hanovana azy ho efitrano fandraisam-bahiny mahafinaritra amin'ny hariva tolotra aperitifa sy digestif.
Manomboka amin'ny volana aprily 2021, zahao ny fitsaboana nentim-paharazana vietnamiana al fresco ao amin'ny LUX * Me Spa, nahazo loka, nafenina tamin'ny ala maitso mavana miaraka amin'ny maritrano nentin-drazana Zhuang.
Vita tamin'ny fitaovana fanatanjahan-tena farany momba ny kardio sy ny lanja farany an'ny Life Fitness, ny gymnasium dia manome fomba fijery mahaliana momba ireo zaridaina maitso ao amin'ilay toeram-pivarotana amin'ny alàlan'ny varavarankely hatramin'ny tafo.